Rabshadihii COVID-19 ee rabshadaha watay ayaa ka faafay Guadeloupe ilaa Martinique
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Martinique Breaking News » Rabshadihii COVID-19 ee rabshadaha watay ayaa ka faafay Guadeloupe ilaa Martinique
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Crime • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Martinique Breaking News • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Kooxdan gadoodka sameeyay ayaa lagu soo waramayaa in ay ka caroodeen in uu qaabili waayay barasaabka Martinique markii ay dhamaatay maalintii ugu horaysay ee banaanbaxa.
Shalay, 17 ururo shaqaale ah oo ku sugan jasiiradda Faransiiska ee Martinique ayaa ku baaqay shaqo joojin guud si ay u muujiyaan ka soo horjeedkooda amarka tallaalka COVID-19 ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo soo rogida kaarka caafimaadka ee coronavirus ee Faransiiska.
Laakiin mudaaharaadyadu si degdeg ah ayay isu beddeleen GuadeloupRabshado rabshado wata oo u eg qaab e-qaab ah oo ay ku jiraan warbixinada booliiska iyo dabdamiska MartiniqueMagaalada caasimadda ah ee Fort-de-France ayaa waxaa ka socda rasaas.
Xaalada ayaa cirka isku sii shareertay markii la sheegay in kooxdan gadoodka sameeyay ay ka cadhoodeen in gudoomiyaha Martinique uu qaabili waayay markii ay dhamaatay maalintii ugu horaysay ee banaanbaxa.
Inkastoo aan la soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay, haddana ciidamada ammaanka iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa marar badan lala beegsaday rasaas, iyagoo ka qayb qaadanayay daminta dabkii xalay ka kacay waddooyinka waaweyn ee magaalada Fort-de-France.
Sida laga soo xigtay MartiniqueAfhayeenka amniga dadweynaha Joël Larcher, saraakiisha booliiska iyo kooxaha dab-damiska ayaa lagu bartilmaameedsaday rasaas, dhowr baabuurna waa la gubay intii lagu jiray qalalaasaha habeenkii.
Rabsha-wadayaashu waxay xidheen waddooyin ku xeeran jasiiradda Kariibiyaanka Faransiiska waxayna sameeyeen dhawr dalab oo dawladda ah, oo ay ku jiraan soo afjarida waajibaadka tallaalka COVID-19 ee daryeelayaasha, iyo sidoo kale codsiyo ballaadhan sida mushahar kordhin iyo dhimista qiimaha shidaalka.
Rabshadaha Martinique ayaa ka faafay meel u dhow Guadeloupe, halkaas oo fowdo ay ka soo degtay ka dib markii ururada shaqaaluhu ay abaabuleen socod socod usbuucii hore si ay uga hortagaan xannibaadaha COVID-19 ee halkaas, oo ay ku jiraan soo bandhigida qasabka ah ee ka hortagga coronavirus jabs ee shaqaalaha caafimaadka.